Ilay Fanoharana Momba ny Samaritanina Tsara Fanahy | Fiainan’i Jesosy
NY TOKONY HATAO MBA HANDOVANA FIAINANA MANDRAKIZAY
SAMARITANINA IRAY TSARA FANAHY
Nisy Jiosy nanatona an’i Jesosy raha mbola teny akaikin’i Jerosalema izy. Te hianatra aminy ny sasany, fa ny hafa te hitsapa azy. Hoy ny iray tamin’izy ireo, izay nahay Lalàna: “Mpampianatra ô, inona no hataoko mba handovako fiainana mandrakizay?”—Lioka 10:25.
Fantatr’i Jesosy fa tsy hoe te hahalala zavatra fotsiny ilay lehilahy. Angamba tiany hilaza zavatra mahatezitra ny Jiosy i Jesosy. Hain’i Jesosy fa efa nanana hevitra masaka tao an-tsainy ilay lehilahy, ka nataony izay hamoahany an’izany.
Hoy i Jesosy: “Inona no voasoratra ao amin’ny Lalàna? Ahoana no fahazoanao azy?” Nianatra ny Lalàn’Andriamanitra io lehilahy io, ka nalainy tao ny valin-teniny. Nilaza teny avy ao amin’ny Deoteronomia 6:5 sy Levitikosy 19:18 izy hoe: “ ‘Tiavo i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo sy ny herinao manontolo ary ny sainao manontolo’, ary ‘tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.’ ” (Lioka 10:26, 27) Izay ve no valiny?
Hoy i Jesosy: “Marina ny navalinao. ‘Izany foana atao dia hahazo ny fiainana ianao.’ ” Nifarana teo ve ny resaka? Tsia. Tsy ny valiny marina fotsiny no notadiavin’ilay lehilahy. Te ‘hanaporofo izy fa marina ny tenany’, izany hoe mety tsara ny fomba fiheviny ka mety koa ny fomba itondrany ny olona. Hoy àry izy: “Fa iza marina moa no namako?” (Lioka 10:28, 29) Toa tsotra ny fanontaniany nefa nisy heviny lalina. Nahoana?
Nihevitra ny Jiosy fa izay manaraka ny fombafomban’izy ireo ihany no atao hoe ‘namana.’ Toa manohana an’izany koa ny Levitikosy 19:18. Nety ho nisy Jiosy nilaza mihitsy hoe ‘tsy azo atao’ ny mifandray amin’ny tsy Jiosy. (Asan’ny Apostoly 10:28) Nieritreritra àry ilay lehilahy fa marina izy raha tsara fanahy tamin’ny Jiosy toa azy. Nisy mpianatr’i Jesosy koa angamba nihevitra toy izany. Nety ho tsy tsara fanahy tamin’ny tsy Jiosy anefa izy ireo, satria hoe tsy ‘namany’ izy ireny.
Ahoana no azon’i Jesosy anitsiana ny hevitr’io lehilahy io, nefa tsy hanafintohina azy sy ny Jiosy hafa? Nilaza izao tantara izao izy: “Nisy lehilahy nidina avy tany Jerosalema ho any Jeriko. Ary azon’ny jiolahy izy io, ka nendahany sady nokapohiny, ary nilaozany teo rehefa saika maty. Ary sendra nidina tamin’iny lalana iny ny mpisorona anankiray, kanefa niampita rehefa nahita azy ary nandalo fotsiny. Ary nidina tamin’iny toerana iny koa ny Levita anankiray ka nahita azy, ary niampita sy nandalo fotsiny koa. Fa nandeha tamin’ilay lalana kosa ny Samaritanina anankiray ka tonga teo aminy, ary nangoraka rehefa nahita azy.”—Lioka 10:30-33.
Fantatr’ilay lehilahy niresahan’i Jesosy fa nipetraka tany Jeriko ny mpisorona sy Levita maro nanampy tao amin’ny tempoly. Tsy maintsy nidina tamin’ny lalana 23 kilaometatra teo ho eo izy ireo rehefa avy tany amin’ny tempoly. Nampidi-doza ilay lalana satria nisy mpandroba niafina. Tsy tokony hanampy ve ny mpisorona sy ny Levita raha tra-doza ny Jiosy iray toa azy? Tsy nanao izany izy ireo tao amin’ilay tantara. Samaritanina iray kosa no nanao izany, nefa halan’ny Jiosy ny Samaritanina.—Jaona 8:48.
Ahoana no nanampiany an’ilay Jiosy naratra? Hoy i Jesosy: “Nanatona izy, ary nofeheziny ny ratrany sady nasiany menaka sy divay. Avy eo, dia nataony teo ambony ampondrany izy, ka nentiny tany amin’ny tranombahiny ary nokarakarainy. Ary namoaka denaria roa izy ny ampitson’iny, ka nomeny an’ilay tompon’ny tranombahiny, dia hoy izy: ‘Karakarao izy, fa haloako izay laninao ankoatra an’ireto, rehefa miverina aho.’ ”—Lioka 10:34, 35.
Nametraka izao fanontaniana mampisaintsaina izao i Jesosy, ilay Mpampianatra Tena Mahay: “Iza amin’izy telo ireo no heverinao fa lasa naman’ilay azon’ny jiolahy?” Tsy nahazo aina angamba ilay lehilahy raha namaly hoe “ilay Samaritanina”, ka hoy izy: “Ilay niantra azy.” Notsorin’i Jesosy avy eo ny lesona tiany hampitaina. Hoy izy: “Mandehana àry, ka mba manaova toy izany koa.”—Lioka 10:36, 37.
Tena nandaitra ny fomba fampianaran’i Jesosy. Nety ho tsy nanaiky mantsy ilay lehilahy sy ny Jiosy hafa teo, raha tonga dia nilaza izy fa naman’izy ireo koa ny tsy Jiosy. Nilaza tantara tsotra sy nisy tsipiriany azon’ny mpihaino izy, ka nazava ny valin’ilay hoe: “Fa iza marina moa no namako?” Izay maneho fitiavana sy tsara fanahy araka ny andidian’ny Soratra Masina no azo lazaina hoe tena namana.
Inona no nety ho nahatonga ny lehilahy iray hanontany an’i Jesosy ny fomba hahazoany fiainana mandrakizay?
Iza no noheverin’ny Jiosy fa namany, ary nahoana?
Ahoana no nanazavan’i Jesosy hoe iza no namantsika?
Inona no dikan’ny tenin’i Jesosy hoe “tiavo ny namanao tahaka ny tenanao”? Ahoana no ampiharantsika an’izany?
Hizara Hizara Nasehon’ny Samaritanina Iray fa Tena Namana Izy